IXESHA LE-SHARKS LIBUYILE - NGABA UNOLOYIKO XA UBONA UMHLOPHE OMKHULU KUFUTSHANE NONXWEME? - IINDABA
Ixesha le-Sharks libuyile - ngaba unoloyiko xa ubona umhlophe omkhulu kufutshane nonxweme?
Ngokufudumeza kwamanzi, ookrebe abaninzi bayavela. Kodwa zeziphi iilwandle eziya kuba ziindawo zabo ezishushu kweli hlobo?
Ixesha le-Shark liqalile kwaye sele lilungele ukuba libe lixakeke kakhulu.
Kusuku lwakutsha nje, ukrebe omkhulu omhlophe wabonwa kwikhamera equbha kude kufuphi neDoheny State Beach eDana Point kwaye kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ukrebe wabonwa etsiba ephuma emanzini e-T-Street eSan Clemente, zombini iindawo ezidumileyo zokusefa. Ividiyo esuka kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ibonisa ukrebe equbha kufutshane neebhodi ezimbini zebhodi eSanta Monica Bay.
Kodwa ungavumeli ukubonwa kookrebe kukoyike - izidalwa azibonakali zingakhathali ngabantu ababelana ngamanzi abo, iingcali zithi.
Ookrebe ngokusisiseko abahoyi abantu, umlawuli weCal State Long Beach Shark Lab uChris Lowe uthe.
Kodwa enye imfundo ebantwini inokuhamba umgama omde.
Ke iiShark Shacks ziya kuqalisa ukuphuma kwiilwandle zasekhaya ukuqala ngoLwesibini, nge-1 kaJuni, emva kokuphumla okunyanzeliswe sisibetho se-coronavirus. Indawo yokuqala yokumisa iya kuba seBelmont Pier, ilandelwa nguHuntington Beach nge-3 kaJuni, kunye nezinye ii-pop-ups ezingaphezu kwama-40 ezicwangcisiweyo ehlotyeni.
Amatyotyombe ooShaka, asungulwe ngo-2019, azakuba nezixhobo ezifana nemihlathi, amazinyo abukhali kunye nezinye izinto ezibonisayo. Abafundi abasebenza ezindlini uya kuphendula imibuzo malunga abamhlophe ezinkulu kunye nezinye izidalwa zaselwandle zasekuhlaleni ezifana stingrays. Lithuba lokufundisa uluntu malunga nobomi bolwandle obufumaneka kude nonxweme kumanzi asekuhlaleni.
Abafundi beCSULB bathetha nabakhenkethi baselwandle, eShark Shack ukuya kufundisa abantu abahamba elwandle ngezidalwa eziselwandle, eLong Beach ngoLwesihlanu, nge-14 kaJuni 2019. iinzame ezifumana inkxaso-mali zokwazisa ngakumbi ookrebe njengoko abantu besanda. (Ifoto nguBrittany Murray, Press-Telegram/SCNG)
Iimpawu zakwangoko zibonisa ukuba oku kubumba ixesha elixakekileyo lookrebe. Ookrebe abasakhulayo, kwezinye iimeko ngokwamaqela aphakathi kwama-20 ukuya kwangama-40, bafumene iindawo ezinamanzi afudumeleyo kufutshane nonxweme ukuze bahlale kuzo, ezibizwa ngokuba ziindawo ezishushu ziingcali.
Kwaye abanye ookrebe abakhulu abancinci, abadla ngokuyishiya indawo xa isantya samanzi sintywila, baxinge, ngokulandela umkhondo weShark Lab.
Ukuza kuthi ga ngoku, ukungcangcazela kookrebe kulandelelwa ikakhulu eSanta Barbara naseSan Diego kwaye kubonakala ngathi ababonakali ngamanani amakhulu ngaphandle kweSouth Bay, iLong Beach kunye neOrange County njengoko benzayo kwiminyaka emihlanu nemithandathu eyadlulayo.
Iyamangalisa, asikwazi ukuqonda ukuba kutheni, utshilo uLowe. Siyathemba ukuba kulo nyaka singakwazi ukufumana isiphatho sokuba kutheni ezi ndawo zishushu zihamba.
Loo nto ayithethi ukuba ookrebe bahlala becace gca kwindawo okanye abazukubonakala ngamanani amakhulu kwiindawo ezishushu zangaphambili.
Sifumana ubhaqo apha naphaya, kodwa kubonakala ngathi bayahamba besiya kwezinye iindawo, utshilo uLowe. Sikrokrela ukuba sinokubona iindawo ezintsha ezishushu phaya. Ngawo onke loo mehlo apho, njengoko abantu beqala ukuwabona, baya kusazisa.
Umfoti uMat Larmand wafumana inqaku lakhe lokuqala lokudubula ukrebe ngelixa ebhabha idrone nge-25 kaMeyi, ngemini apho umoya namaza ayepholile kwaye ukubonakala kuvunyelwe kwimifanekiso engaphantsi komphezulu wolwandle.
Ndiye ndachukumiseka ukuba ekugqibeleni ndibone enye, bendikhe ndeva ngokubona okumbalwa kodwa imozulu ibingentle, ukuze ekugqibeleni ndibe nosuku olunelanga kungekho moya, bekumnandi, utshilo. Kuhlala kupholile ukubabona, oko kuthetha ukuba ekugqibeleni amanzi ayafudumala.
UCarlos Guana, othumela iividiyo zakhe TheMalibuArtist , ebefumana umfanekiso omangalisayo wookrebe abaphila kunye nabantu kunxweme lwaseSanta Monica Bay, bequbha nje kufutshane nabasefa, iibhodi ezibheqa ngamaphini kwaye kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo abantwana ababini abancinci abangacingeli nto kwiibhodi zomzimba.
Ukuba kukho into enye endiyifundileyo, kukuba bebesoloko bekhona. Basoloko besijikelezile, utshilo uGuana, owenza iifilimu ukusuka eSan Diego ukuya eSanta Barbara. Imifanekiso eshukumayo isinceda nje sibone ukuba yintoni ebisoloko isenzeka.
Lulungelelwano oluhle phakathi kokuhlonipha apho kuhlala khona ookrebe kunye nokuqonda ukuba usesengozini ukuba awufundanga ngabo, utshilo.
Nangona kunjalo, abantu kufuneka bakhumbule ukuba bangamarhamncwa aphezulu. Kwimeko yaba bancinci be-bodyboarders, uthe uye waya kubalumkisa ngokrebe, kwaye kukho neempawu ezixhonyiweyo, kodwa kungekudala emva kokuba bebuyele emanzini.
ULowe uthethe ngemifanekiso ethathwe nguGuana, uninzi lookrebe abangaqatshelwanga njengoko besondela ebantwini emanzini.
Imifanekiso emihle, singoososayensi kwaye izinto zethu zezekliniki, utshilo uLowe. Ibonisa uluntu kukho ookrebe kunye nabantu kunye ngamaxesha onke. Asikwazi nje ukubabona.
Njengoko iidrones ezininzi zibonisa eyona nto yenzekayo phakathi kookrebe nabantu, iya kunceda ukutshintsha indlela abantu abajonga ngayo ookrebe, utshilo.
Ukuba ubukela iVeki yeShark, uyayibona. Unalo luvo lokuba xa ubona ukrebe, uya kukuhlasela, utshilo. Ngoku sinexabiso leminyaka elishumi ledatha ukubonisa ukuba ayonyani.
Ookrebe abancinci bathanda ukunamathela kufutshane nonxweme ngenxa yamanzi angekho nzulu, afudumeleyo kunye nomthombo wabo wokutya - i-stingrays kunye nezinye iintlanzi ezincinci - zifumaneka kufuphi nonxweme, iingcali zikholelwa.
U-Lowe uthe i-Shark Lab ijonge ekudaleni i-app entsha eza kuvumela uluntu ukuba luncede ekulandeleni ookrebe ngokunika ingxelo ngokubabonayo.
Sisajonge kuyo, siyibiza ngokuba yiprojekthi yesayensi yabemi, utshilo, esithi banethemba lokuyisungula ngelinye ixesha kweli hlobo.
Siza kuqinisekisa lonke ulwazi, utshilo. Akukho nto iya kuthunyelwa de iqinisekiswe.
Enye iprojekthi kwimisebenzi ijolise ekufundeni indlela abantu abajonga ngayo ookrebe kunye nobunye ubomi baselwandle. Abafundi beShark Lab basebenzisana nesayikholojisti, eyincutshe kwisifundo soloyiko, ukuntywila kwesi sifundo.
Sifuna ukufundisa uluntu ngokusekelwe kwinzululwazi esinayo. Ukwenza oko, kufuneka sazi iimbono zabantu, utshilo uLowe. Ngaba sitshintsha iintliziyo neengqondo malunga neengozi zokrebe?
Uphando lwe-intanethi olubizwa ngokuba Iimbono ngeZilwanyana zasendle kunye noKhuseleko lwaseLwandle, kuthatha imizuzu engama-45 eqikelelwa kwaye ilinganisa iingcinga zabantu ngookrebe kunye nobunye ubomi baselwandle.
UTahoe's Safeway Bear wabulawa kwinkampu yosapho
Yintoni kanye kanye eyayisenziwa liraku kwisango lam elingasemva?
Xa kufikwa kwiminenga ebulalayo, izazinzulu ezininzi zaselwandle azithethi nto intsha apha
Udibana nebhere. Inyathelo lakho elilandelayo libaluleke kakhulu. Ngaba uyazi ukuba wenze ntoni?
Indawo yaseBay ngaphandle: iipaki ezi-5 kunye nendalo igcina ukuphonononga le ekwindla
Siyivuyela kakhulu le nto. Sikrokrela ukuba iya kwahluka kakhulu, utshilo uLowe. Kukho abantu, uninzi lwabemi balapha eMazantsi eCalifornia, abasebenzisa ulwandle kakhulu. Isiseko sabo solwazi sahlukile kubantu abeza kanye ngonyaka, bevela eKansas okanye ekhefini.
Ekugqibeleni, injongo kukufundisa abantu ukuba bangoyiki kangako ookrebe, utshilo.
Njengoko ixesha lasehlotyeni elixakekileyo lisondela, i-Shark Lab ithumele iingcebiso kumajelo eendaba ezentlalo ukuze uluntu lwazi xa kunokwenzeka ukuba badibane nokrebe.
Elinye icebiso, ukuba udibana nokrebe, gcina amehlo akho kulo. Ngokugcina amehlo akho kukrebe, kwaye ukhomba ibhodi yakho kubo, baya kukwazi ukuba uyababona kwaye kunokwenzeka ukuba bajike bakushiye wedwa.
Nika ingqalelo kwindlela yokuziphatha kwezilwanyana. Iibhola zesithiyelo kunye nezilwanyana ezincancisayo ezitsibayo ebhodini yakho ziluphawu lokuba amarhamncwa anokubakho. Hlala ujonge kwaye uqubhe ngokukhuselekileyo ubuyele elunxwemeni.